Seattle ay noqoto magaalo heer sare a.; Waliba mark la ii doortay Duqa Magaladda Seattle, haddii aan si wada jir ah u wada shaqeyno waxaan gaarsiin karnaa si kaba sii wanaagsan
Waxaan rabaa in aan 100 maalmood oo xafiiska igu horeeyo in aan. Shaqadii iyo isku soo diyaarintii shir-weynahaana waay bilaabatey wayna socotaa.
Maamulkeyga iyo Anigu waxaan aamin sanahay in aay jirto baahi loo qabo in la helo maamul la fahmi karo oo aan is-bedbeddel lahayn oo diyaarna u ah inuu dhageeysto talooyinka ay soo jeedin doonaan horseedayaasha ummadda ku nool magaaladan.
Waxaa kaloo ii muuqata inaay jirto fursad aan ku kobcin karno sidduu maamulka degmadu ula shaqeey doono horseedayaasha xaafad waliba ay leedahay markii ay timaato qorsheynta sidda loo kala mudan yahay deeqaha iyo maalgilinta degmadu ay bixineeyso.
Sabaabta aan u qabanayo shir-weynahaan waa - inaan u helno fursad inoo masaamaxda inaan u wada hadalno si daacadnimo iyo/ama qalbi furnaan ah. Waxaan rajeynayaa, in inagoo u kala harin aan wax ka qabano xiriirka ka dhaxeeya maamulkeyga iyo xaafadaha - si aan u soo celino kalsooni u wada shaqeynta, dhaqan-gelinta awamiirteena, iyo adkeeynta hadafkayaga.
Haddaba, shir-weynahan ee Seattle ka nici doona waa talaabadii u horeysay ee inoo masaamixi doonta inaan yeelano wadahadalo tixane ah. Ssidaas-darteen, waxaan kugu boorinayaa inaad inagu soo biirtid, miiskana aad dhinacaada ka soo fariisatid.
Calaamadeyso Maalinta: Sabtida, April 5th - 9:00 a.m. to 1:00 p.m. Seattle Center, Exhibition Hall
Talo Inoo Soo Jeedi: Ku soo dir onlaynkeena fikradahaada Fill out our online survey si aad inoogu sheegtid waxaad jeclaan laheyd in shir-weyne xaafadeedkan ee Seattle uu soo kordhiyo iyo waxaay adigu kula tahay in xaafadaadu ay u bahaan tahay.
Si aad ula socotid waxa ku soo kordhey qaban-qaabadda shir-weyne xaafadeedka Seattle, si joogta ah u soo booqo qadkeena. Haddi aad rabtidna inoogu soo dir email ciwaankayaga ee ah sidda soo socota: SNS2014@seattle.gov ama inaga soo wac telefoon numbarka: 206.684.8069.
Mahadsanid. Duqa Magaalada: Ed Murray